वि’वाद’पछि पहिलो पटक पुजा आकाश फ्यानहरु सँग एक साथ, फ्यानहरुको प्रश्नमा पुजा आकाश को जवाफ कस्तो छ? ( भिडियो सहित):: Mero Desh
वि’वाद’पछि पहिलो पटक पुजा आकाश फ्यानहरु सँग एक साथ, फ्यानहरुको प्रश्नमा पुजा आकाश को जवाफ कस्तो छ? ( भिडियो सहित)
Published on: २५ श्रावण २०७८, सोमबार ०७:२९
वि’वाद’पछि पुजा आकश पहिलो पटक एक साथ मिडिया मा फ्यानहरु सँग आएका छन्। लोकप्रिय कलाकार आकाश र पुजालाई दर्शकले निकै रुचाएको जोडि हुन्। पछिल्लो समय नवि’वाद’मा तानिएका पुजा आकाश बिचको सम्बन्धले निकै च र्चा पाएको थियो । उनिहरु दुई जनाको जोडि
मन पराउने दर्शक श्रोताले बि’हे गर्ने समेत द’बा’ब दिदै आएका थिए। तर पुजा आकाश भने भाग्यमा लेखेको हुनु पर्छ दर्शक श्रोताको दबा’बले हुदैन भन्छन् । एक साथ मिलेर हिडेको जोडि पुजा आकाश अहिले एक्ला एक्लै हिड्छन्। भरखरैमा मात्र रिलिज भएको ‘धर्ती आकाश ‘ गितको म्युजिक भिडि’योमा काम गरेका पुजा आकस सुटिङ स्पोर्ट्मा समेत बोल्न अप्ठेरो मान्दै बोल्ने गरेका थिए ।
पहिलाको जस्तो हासेर बोल्न नसकेका पुजा आकाश म्युजिक भिडियो रिलिज , हुदा हलमा समेत अलग’ बसेका थिए। पुजा आकाश लाई फ्यानहरुले अनेक प्रश्न सोधिरहेका छन् हामीले देख्दा पुजा आकाश सधै एक साथ देख्न पाउ भन्दै फ्यानहरुले दबा’ब दिइरहेका छन् ।पूरा समाचार तलको भिडियोमा हेर्नुहोस्